प्रदेश २ का नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई छैन आवास – Saurahaonline.com
प्रदेश २ का नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई छैन आवास
जनकपुरधाम, १७ फागुन । प्रदेश २ का नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई आवास नहुँदा आ–आफ्ना घर फर्केका छन् । पदभार ग्रहणलगतै नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्री गृहजिल्ला गएका हुन् । होली पर्वका कारण प्रदेश २ मा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म कार्यालय बन्द हुने भएपछि आइतबार मात्र आवासको व्यवस्था हुने एक कर्मचारीले बताए । सामाजिक विकासमन्त्री नलवकिशोर साह पदभार ग्रहणपछि गृहजिल्ला सप्तरी प्रथान गरे ।
कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह पनि पदभार ग्रहणपछि गृहजिल्ला सप्तरी नै गए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको घर जनकपुरमै रहेकाले उनी जनकपुरै छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय पनि बिहीबार गृहजिल्ला सर्लाही जाने कार्यक्रम छ । राज्यमन्त्रीहरू उषा यादव गृहजिल्ला बारा, योगेन्द्र यादव गृहजिल्ला रौतहट र सरोजकुमार सिंह महोत्तरी प्रथान गरे ।
लगातार तीन दिन छुट्टी हुने भएपछि मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत पनि बुधबार नै गृहजिल्ला पर्सा गएका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक आतिश मित्रका अनुसार होलीमा बिदा हुने भएकाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू घर गएका हुन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल पनि गृहजिल्ला बारा गएका छन् । मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले बुधबार थप चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपेका थिए ।आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
के–के निर्णय गरे नयाँ मन्त्रीले ?
अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग सुरक्षासम्बन्धी जानकारी लिए । त्यसपछि मन्त्रालयको प्रवक्तामा सुरक्षा महाशाखाका उपसचिव अर्जुन शर्मालाई नियुक्त गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले बालबालिकालाई नियमित विद्यालय ल्याउने गरी कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले कृषिसँग सम्बन्धित पसल तथा उद्योगको अनुगमन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । त्यसको सुरुवात जनकपुरबाटै गर्ने निर्णय भएको मन्त्री साहले बताए ।
तीन भाषामा शपथ
संघीय फोरमका तर्फबाट मन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र शैलेन्द्र साहले मैथिलीमा शपथ लिए । राजपाबाट मन्त्री भएका नवलकिशोर साह र रामनरेश रायले हिन्दीमा शपथ लिए छन् । त्यसैगरी, राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव र सरोजकुमार सिंहले मैथिली र उषा यादवले भोजपुरीमा शपथ लिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनीको ब्रान्डिङ शुरु २०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार
एमालेमा ओली र नेपालको शक्ति ‘बराबर’ (नामावलीसहित) २०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार
पछिल्लो २४ घन्टामा ५९ जनामा कोरोना पुष्टि, ६० जना संक्रमणमुक्त २०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार
पोखरा महानगरमा भोलि सार्वजनिक विदा २०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार
कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका ४ जनाको शव भेटिए, अझै एक जना बेपत्ता २०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार
माओवादी केन्द्रको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ? २०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार
सिद्धार्थनगर : बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले लुम्बिनीको ब्रान्डिङ.....
कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका ४ जनाको शव भेटिए, अझै एक जना बेपत्ता
माओवादी केन्द्रको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?